Luyindida olwezindlu kwaXaba | News24
Luyindida olwezindlu kwaXaba
UDABA lwezindlu lakwaXaba luthanda ukuba yindida njengoba abahlali nekomidi lewadi bethi ungqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uMnu. Ravi Pillay akazigcini izithembiso zakhe.
Oyilungu lekomidi uMnu. Selby Mzindle uthe abakuzwayo ngezindlu zemixhaso abebezicelile kuPillay akusayi ngamagama enkehli. uMzindle uthe bona bacela izindlu zomxhaso ezi-2000 kepha manje kuthiwa bazokwakhelwa ezingama-500.
“Lokhu esikuzwayo akusikhona akusho ungqongqoshe uPillay emhlanganweni esasinawo naye.
Okhulumela umnyango uMnz Mbulelo Baloyi uthe ungqongqoshe wakhuluma nomphakathi wachaza ukuthi kunezinkinga zokuthola indawo eyanele yokwakha lezi zindlu. Uthe waqhubeka wachaza ukuthi njengoba umphakathi ucele lezindlu ezingaka, kudingeka imali yangempela kanti umnyango awumile kahle kwezezimali, ngeke ukwazi ukwakha lezindlu zonke ngesikhathi esisodwa.
“Waphinde washo ukuthi inkampani eyathola ithenda iFezeka Agents izoqala ngezindlu ezingama-500.
Waphinde washo ukuthi ukwakhiwa kwalezindlu kuzoqala ngoMbasa (April) onyakeni ozayo (2017).
Lokhu wakugcizelela esho ukuthi uma ukubhaliswa kwabantu kushesha kungenzeka ukuthi kuqalwe masishane.”